Breaking: Waraanni Sudaan karaa Lixa Gondariin bifa haaraan daangaa xoophiyaa cabsee galuudhaan weerara bal’aa geggeessaa jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBreaking: Waraanni Sudaan karaa Lixa Gondariin bifa haaraan daangaa xoophiyaa cabsee galuudhaan weerara bal’aa geggeessaa jira.
#BREAKING NEWS Muddee 12/12/2020
Waraanni Sudaan karaa Lixa Gondariin bifa haaraan daangaa xoophiyaa cabsee galuudhaan weerara bal’aa geggeessaa jira.
Waraanni Sudaan karaa Lixa Gondariin bifa haaraan daangaa xoophiyaa cabsee galuudhaan weerara bal’aa geggeessaa jira. Weerara waraanaa kanaan magaallonni daldalaa fi balballi Itoophiyaan ittiin boba’aa Sudaan irraa galchitu Matammaa irratti cufameera.
Magaalonni godina Lixa Gondar jala jiran kanneen akka Matammaa, Sheedii, Hayider ,Barakat fi Hambeen jedhaman guutumatti waraana Sudaanin kan too’ataman yoo tahu qabeenyi guddaanis saamamuu fi gubachuun beekameera.
Yeroo Waraanni Shaabiyaa Tigraay keessatti lolaa jiru kanatti mootummaan Sudaan waraana isaa gara Itoophiyaatti bobbasuun isaa lolli deemaa jiru kun sadarkaa Gaanfa Afrikaati babal’achaa jiraachuu agarsiisa jedhu taajjabdoonni siyaasaa. Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarrati ibsi hanga ammaa ibsa kenname hin jiru. Isa lafaan fudhati isa ukaa buuste jedha oromoon Yeroo mammaaku.nafxanyaan adeemtee biyya namaa weeraruuf harkanii guyyaa abjuutii;garuu Rabbiin immoo karaa isheen hin beenneen qaama ishee weeraru gadi itti dhiisee jira